Fivoaran'ny andro ratsy ::Tandindonin’ny rivo-doza ny faran’ny herinandro • AoRaha
Fivoaran’ny andro ratsy Tandindonin’ny rivo-doza ny faran’ny herinandro
Hahazo hery, ato anatin’ny 48 ora, indray ilay tangoron-drahona narahi-maso tany amin’ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Nahazo vahana izy tao anatin’ny 24 ora.
Mivoatra manodidina ny foibeny ny andian-drahona miaraka aminy. Mitondra rivotra mafy hatramin’ny 64km isan’ora miaraka aminy io tangoron-drahona io. Any amin’ny tanjona Masoala, any amin’ny faritra Atsinanan’ny Nosy no vinavina­ina hiforonany ho rivo-doza, amin’ny faran’ity herinandro ity.
“ Mihafeno tsikelikely ny fepetra hiforonany ho rivo-doza, toy ny hamandoana eny amin’ny habakabaka sy ny fahamarinan-toeran’ny rivotra. Nahitana fiakarany, ka lasa manodidina ny 29°C ny hafanan’ny ranomasina”, hoy ny fanazavan’ny teknisiana ao amin’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro, omaly. Mikisaka mianatsimo-atsinanana ary tombanana hanatona ny nosy La Réunion sy Maorisy ny lalany.
“Hiteraka oram-baratra any amin’ny faritra Analanjirofo sy Sava anefa ny andian-drahona miaraka aminy ka hitondra oram-baratra amin’ireo faritra ireo”, araka ny fanampim-pana­zavana voaray. Any amin’ny tapany avaratry ny Nosy no hisy orana arahin-kotroka, anio. Ho maina ny faritra sisa saingy mbola mitoetra ny volon’andro ririnina.
Fanampiana avy any ivelany :: Nanome vary eninjato taonina ny Indiana